Umgaqo wabucala Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukulungiselela iinjongo zomthetho osele ukhankanyiwe wokuKhuselwa kweDatha yobuNtu, idatha yobuqu osithumela yona iya kuthi ibandakanywe kwiFayile "YABASEBENZISI BEWEBHU kunye nababhalisile", ephethwe yi-Online SL. Le fayile iphumeze onke amanyathelo okhuseleko obuchwephesha nawombutho asekwe kwiRoyal Decree 1720/2007, kuphuhliso lwe-LOPD.
Ukuthumela idatha yobuqu kule webhusayithi kunyanzelekile ukuba uqhakamshelane, uphawule, ubhalise kubalandeli bebhlog.online, ikhontrakthi yeenkonzo eziboniswe kule webhusayithi kwaye uthenge iincwadi kwifomathi yedijithali.
balandeli Iinkcukacha zobuqu eziqokelelweyo, kuxhomekeka kwimeko nganye kunokuba, phakathi kwezinye: igama, ifani, i-imeyile kunye nokunxibelelana ukufikelela. Kwimeko yeenkonzo zekhontrakthi, ukuthenga iincwadi kunye nentengiso, ndiza kucela uMsebenzisi ngolwazi oluthile lwebhanki okanye lwentlawulo.
Ukuphendula kwiimfuno zomsebenzisi: Umzekelo, ukuba umsebenzisi ushiya ulwazi lomntu kuye nakweyiphi na iifom zonxibelelwano, singasebenzisa olu lwazi ukuphendula isicelo sakho kwaye siphendule nakuphi na ukuthandabuza, izikhalazo, izimvo okanye iinkxalabo ezinokuvela. unolwazi kulwazi olufakwe kwiWebhusayithi, iinkonzo ezinikezelwa kwiWebhusayithi, ukuqhubekiswa kwedatha yakho yobuqu, imibuzo malunga nemibhalo esemthethweni efakwe kwiWebhusayithi, kunye nayo nayiphi na eminye imibuzo onokuba unayo.
Ukumodareyitha nokuphendula kwizimvo ezenziwe ngabasebenzisi bebhlog.
Ukubonelela ngeenkonzo eziyimfuneko ngokungqongqo kuphuhliso lomsebenzi wayo, i-Intanethi ye-SL yabelana ngedatha naba baboneleli balandelayo phantsi kweemeko zabo zabucala.
Umsebenzisi unelungelo lokurhoxisa imvume yakhe yangaphambili nangaliphi na ixesha.
Iinkqubo zokufaka ulwazi lomntu olusetyenziswa ngabalandeli :
Xa usebenzisa iinkonzo zeplatform yeChannelChimp yokuqhuba amaphulo okuthengisa nge-imeyile, ulawulo lwemirhumo nokuthumela iileta zeendaba, kuya kufuneka uyazi ukuba MailChimp Ineeseva zayo ezisingathwe eMelika kwaye ngenxa yoko idatha yakho yobuqu ziya kudluliselwa kwilizwe lakwilizwe elithathwa njengezingakhuselekanga emva kokuchithwa kweZokhuseleko oluKhuselekileyo. Ngokwenza ubhaliso, wamkela kwaye wavuma idatha yakho igcinwe liqonga le-imeyile le-imeyile, elizinze e-United States, ukuze kulawulwe ukuthumela iileta zeendaba ezihambelanayo. Imeyilech iqhelekile kwimigangatho esemgangathweni ye-EU kukhuseleko lwedatha.
Ukuthengisa iimpapashoNgokusebenzisa i-portal ungathenga ushicilelo kunye ne-infoproduct ye-Intanethi ye-SL, kule meko, idatha yomthengi (Igama, ifani, kunye nenombolo yomnxeba, idilesi yeposi kunye ne-imeyile) ziyafuneka ngeqonga lePaypal njengendlela yentlawulo .
Abasebenzisi banako ungabhalisi nangaliphi na ixesha yeenkonzo ezibonelelwa ngabalandeli. kwi-Newsletter efanayo.
Kwi followers.online sikwafunda nokukhethwa ngabasebenzisi bayo, iimpawu zabo zedemokhrasi, iipateni zabo zendlela, kunye nolunye ulwazi kunye ukuqonda ngcono ukuba ngubani abaphulaphuli bethu kunye nento abayifunayo. Ukulandelela ukhetho lwabasebenzisi bethu kukwasinceda ukuba sikubonise ezona ntengiso zichaphazelekayo.
Umsebenzisi kwaye, ngokubanzi, nawuphina umntu wendalo okanye wezomthetho, unokuseka ikhonkco okanye isixhobo soqhakamshelwano lobuchwephesha (umzekelo, amakhonkco okanye amaqhosha) kwiwebhusayithi yabo ukuya kubalandeli.online (i "Hyperlink"). Ukusekwa kwe-Hyperlink akuthethi nakweyiphi na imeko ubukho bobudlelwane phakathi kwabalandeli.online kunye nomnini wesiza okanye iphepha lewebhu apho i-Hyperlink isekwe khona, okanye ukwamkelwa okanye ukuvunywa ngabalandeli. iinkonzo. Ngayiphi na imeko, abalandeli.online banelungelo lokuthintela okanye ukukhubaza nayiphi na ikhonkco kwiWebhusayithi nangaliphi na ixesha.
Abasebenzisi banako ungabhalisi nangaliphi na ixesha yeenkonzo ezibonelelwe ngabalandeli.online ngencwadana enye.
Umsebenzisi uqinisekisa ukuba idatha yobuqu ebonelelwe kwiifom ezahlukeneyo iyinyani, inyanzelekile ukuba inxibelelane naluphi na uhlengahlengiso lwayo. Ngokunjalo, uMsebenzisi uqinisekisa ukuba lonke ulwazi olunikiweyo luyahambelana nemeko yabo yokwenyani, ukuba ihlaziyiwe kwaye ichanekile. Ukongeza, uMsebenzisi uthembisa ukugcina idatha yabo ihlaziywa ngalo lonke ixesha, enoxanduva lokungachaneki okanye ubuxoki bedatha ebonelelweyo kunye nomonakalo onokubangelwa koku kwi-Intanethi ye-SL njengomnini wabalandeli bewebhusayithi.
Unokwalathisa unxibelelwano lwakho kwaye usebenzise amalungelo ukufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa kunye nenkcaso ngeposi ngeposi apha. okanye kwi-imeyile: info (at) abalandeli.online kunye nobungqina obusemthethweni, njengefotokopi ye-DNI okanye efanayo, ebonisa kumxholo othi "UKHUSELEKO LWEDATHA".
Umsebenzisi uxele ukuba wazisiwe ngemiqathango yokhuseleko lwedatha yobuqu, ukwamkela kunye nokuvuma unyango lwayo yi-Online SL ngendlela nangeenjongo ezichaziweyo kwisaziso esisemthethweni.
I-Intanethi ye-SL inelungelo lokuguqula lo mgaqo-nkqubo ukuze uhlengahlengise kwimithetho emitsha okanye kwezomthetho ngokunjalo nakwinkqubo zeshishini. Kwiimeko ezinjalo, uMboneleli uya kubhengeza kweli phepha utshintsho olwenziwe ngolindelo olufanelekileyo lokuphunyezwa.
Ngokuhambelana ne-LSSICE, kwi-Intanethi i-SL ayenzi iinkqubo ze-SPAM, ngenxa yoko ayithumeli ii-imeyile zorhwebo ezingakhange zicelwe ngaphambili okanye zigunyaziswe nguMsebenzisi, ngamanye amaxesha, inokuthumela ukukhushulwa kunye nokunikezelwa kwayo kunye nabantu besithathu, kuphela kwiimeko apho unegunya labamkeli. Ngenxa yoko, kwifomu nganye ebonelelwe kwiWebhusayithi, uMsebenzisi unethuba lokunika imvume yakhe yokufumana "iNcwadana yam", ngaphandle kolwazi lwentengiso oluceliweyo. Unokurhoxisa umrhumo wakho ngokuzenzekelayo kwiincwadana ezifanayo.